Top 10 địa chỉ quán nướng quận 10 chất lượng nhất | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Top 10 địa chỉ quán nướng quận 10 chất lượng nhất | Excitinghochiminhcity
District 10 inzvimbo ine zvakawanda zvinokwezva vashanyi muSaigon. Nokudaro, iyi zvakare “paradhiso yekudya” yevanodya. Kune timu yekunwa, nzvimbo ino imusha kune akawanda akanakisa barbecue maresitorendi. Sevha kero gumi neDigiticket District 10 barbecue shop zvinonaka kanganwa nhamo!
2 2. Mambo BBQ
3 3. Dolpan Sam
4 4. Tasaki BBQ
6 6. Bac Hai tile shop
7 7. Ms. Khanh’s barbecue shop
8 8. Bake Nha.1
9 9. Restorendi 399 Cu Bin
10 10. Yakagochwa Sau Ndove
Kero: 521 Nguyen Tri Phuong, Ward 8, Dunhu 10, Ho Chi Minh Guta
Maawa Okushanda: 10:00am – 10:00pm
Reference mutengo: 250,000VND – 350,000VND
Kukwira pamusoro peiyo barbecue resitorendi muRuwa 10 ndeyechokwadi Gogi House, yekutanga isina utsi grill brand muVietnam. Semhando yeGolden Gate Group, ine makore akawanda eruzivo muindastiri yeF&B, Gogi yave nemaresitorendi anodarika 165 munyika yose.
Menyu yakapfuma uye yakasiyana-siyana nemidziyo yakawanda yeKorea. Pano, iwe unogona kuisa fomu re la carte kana barbecue buffet. Nguruve, nyama yemombe inonatswa zvinoenderana nemabikirwo akasarudzika. Zvinotengeswa kunze kwenyika, mavambo akajeka, matsva uye anonaka. Nyama yakagochwa yakabikwa nemiriwo yakasvibira uye yakanyikwa muSsamjang sosi ine hwema hweKorea bhinzi paste.
Nzvimbo yekudyira yakagamuchira kurumbidza kwakawanda neKorea yakajairwa dhizaini maitiro. Trendy pale yellow wood tones, zvigaro zvitema zvematehwe, pamwe neinodziya yero light system, zvinogadzira nzvimbo ine hushamwari, ine mhepo uye yepwere.
Chinyorwa chidiki: Chitoro chakazara vanhu, panguva dzepamusoro kana pazororo kazhinji chinokurumidza kuzadza. Dana mberi kuti uchengete tafura kuti udzivise kumirira kwenguva refu. Mumwaka wekupisa, hurongwa hwekutsvaira hahubatsiri, huchiri kuvharwa neutsi.
Mazano enzvimbo dzinonaka dzekugocha dzekuyedza muSaigon:
2. Mambo BBQ
Kero: 716 Su Van Hanh, Ward 10, Dunhu 10, Ho Chi Minh Guta
Reference mutengo: 250,000VND – 300,000VND
Nezita rekuti Gogi House mune runyorwa rwemaresitorendi ebarbecue muDunhu 10, zita rekuti King BBQ haringakanganwike. Akakodzera “King of Grill”, King BBQ mukwikwidzi anotyisa weGogi uye mamwe akawanda maKorea magrill brand. Aine zvitoro zvinopfuura zana muVietnam, Mambo Nuong akabata chakavanzika chekugadzirisa chimwe chemhando.
Iyi ndiyo mhando yegrill iyo ine yakawanda yakawanda-kosi buffet. Nendiro dzinopfuura mazana maviri dzakagochwa uye ndiro dzakawanda kunze kwekimchi flavour, King BBQ ikero yakavimbika kune vanoda barbecue.
PaKing BBQ, pane recipe ye nyama yakakanyiwa yakagadzirwa nemukurumbira wekuKorea chef. Iyo marinade yakapfuma, inonaka, uye yakakodzera kuravira kwevanhu veVietnamese. Iyi resipi inopihwa kune ese King BBQ zvivakwa muVietnam.
Yakapamhama, ine hunhu nzvimbo ine dema seruvara rukuru. Iyo yero mwenje sisitimu inogadzira kugadzikana kunzwa, kupenya nzvimbo. Yemazuva ano, inoyevedza yekugara uye grill ine yakagadziriswa exhaust system.
Tsvaga mamwe ekanakisa barbecue maresitorendi muHo Chi Minh City echikwata chinoda xeo:
Ongorora Anrakutei Super inoyevedza yekuJapan barbecue restaurant yekuungana
Kero: Van Hanh Mall, 5th Floor, No.11 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Reference mutengo: 179,000VND – 249,000VND
Zvichida Dolpan Sam haazivikanwe kune vekuKorea vakapindwa muropa nebarbecue. Semhando yekutanga yedombo regrill kudzokera kuVietnam, Dolpan Sam weRed Sun akamutsa tsika yekugocha pasina kubata nemoto.
PaDolpan Sam, vanodya vane mukana wekuona nyowani, yakajairwa yeKorea-maitiro ematombo etafura grill. Neiyi nzira yekugocha, ndiro yacho haisi kutsva nyore nyore nekuda kwekusangana zvakananga nemoto senge marasha emarasha. Nekuda kweizvozvo, zvakabikwa zvinochengeta kutsva, kunakidza uye kutapira kwechisikigo. Iwe unozozvipupurira wega maitiro ehunyanzvi sevhisi yevashandi kuDolpan.
Chikafu chematombo chiri paresitorendi chinosanganisira zvinodarika gumi nembiri zvinoyevedza dhishi: dumbu renguruve, dumbu shanu renguruve, matatu enyama yemombe yekuAmerica, bhaketi remombe, bendekete rakaonda… Menyu yenyama inosanganisira zvose zviri zviviri zvakakanyiwa uye zvisina kunyungudutswa zvekudya zvekusarudza kubva. Pamwe chete neanopfuura manomwe echinyakare echiKorea panchan ndiro senge mazai akabikwa, muto wegungwa, mupunga wakasanganiswa …
Nzvimbo yechidiki, madziro ezvidhinha, zvazvino, zvakajairwa chimiro che kimchi restaurant. Iyo yakareruka yehuni-ruvara rwebarbecue tafura nemacheya zvinogadzira nzvimbo ine chiedza uye ine mhepo.
Chitoro chakazara vanhu panguva dzepamusoro-soro kana mazororo. Dana mberi kuti uchengete tafura kuti udzivise kumirira kwenguva refu. Iyo exhaust system haishande, ichiri kunhuwa utsi.
Kero: Van Hanh Mall, 6th Floor, No.11 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh Guta
Reference mutengo: 269,000VND – 469,000VND
Mushure mekuongorora maresitorendi ekuKorea barbecue muDunhu regumi, ngatinakirwei nemhando yeJapan barbecue neDigiticket. Chokwadi chikwata chegrill chakanyanya kujairana neakakurumbira Yakiniku grilling art, marasha ekubikisa muchimiro chePhu Tang. Saka zvirokwazvo haugone kupotsa Tasaki BBQ muDunhu rechigumi.
Yakasarudzika uye inotonhorera nzvimbo, vanodya vanogona kusarudza kugara parutivi rwechinyakare kana patafura. Nemakore anopfuura makumi mana ane ruzivo rwechiJapan chef Chiba Kazuhiko, vashanyi vachanakidzwa nendiro dzinopfuura mazana maviri zvinosanganisira grilled uye la carte.
Tasaki BBQ ine mukurumbira nekuda kwemhando yayo yekutanga Wagyu nyama yemombe ine zvinonaka zvinonaka. Yakasanganiswa nemarasha grill, nyama yemombe inopa yakasikwa, inonaka kutapira. Zvitsva zvinongedzo, zvinounzwa kunze nematanho akawanda ekunyatsoongorora. Nyama inounzwa yakakora uye inoyevedza pandiro inobata maziso zvakanyanya.
Reference mutengo: 199,000VND – 269,000VND
Iri munzvimbo yechitanhatu pauriri hweVan Hanh Mall, Aka House imwe yedunhu 10 barbecue restaurant ine Japanese barbecue style. Nzvimbo yacho yakagadzirirwa zvinyoronyoro, ine magadzirirwo enyika yezuva rinobuda. Iyo resitorendi inokwezva nhamba huru yevanodya uye vechidiki kuti vanakirwe.
Menyu ine zvidya zvakakangwa zvakadai se: Chidya chehuku neJapan soy muto, American beef flower corn, lean core of beef shoulder, Kabachi Shrimp, marinated American beef neck… Nzira yekubika ndiro nehupfumi hwakakangwa Yakiniku identity. Zvokudya zvemuriwo zvakadai semusanganiswa sipinachi kobacho uye eggplant zvakare zvakakurumbira zvikuru.
Mukati memaawa akakwirira, zvokudya zvinononoka kusvika uye kazhinji kazhinji zvinopererwa nenzvimbo. Rongedza tafura pachine nguva kuitira kuti usazomirira kwenguva refu. Mitengo yekunwa ndeye “yakachipa”. Iko hakuna exhaust system, saka zviri nyore kubata utsi.
6. Bac Hai tile shop
Kero: BB21 Nguyen Gian Thanh, Ward 15, Dunhu 10, Ho Chi Minh Guta
Reference mutengo: 50,000VND – 200,000VND
Gara kure neJapan-Korean style grills muDunhu 10, huya kuVietnamese cuisine ine Digiticket. Tile kubika kwave kwenguva refu yave tsika yekubika muSaigon. Munharaunda yeDistrict 10, munhu wese anoziva nezveBac Hai grilled tile. Ichiri chitofu chemarasha, asi pachinzvimbo chekushandisa simbi yesimbi, chitoro chinoshandisa tile gobvu, kuravira kwacho kunoshamisa.
Mataira ane yakanaka yekupisa dhizaini uye anoramba achipisa kwenguva yakareba. Kunhuhwirira kwenyama kana yakagochwa patile kunoshamisawo, asi inochengeta kupfava uye kutapira kwenyama. Menyu paresitorendi yakapfuma nemhando dzakawanda dzenyama seyenguruve, mbudzi, nyama yemombe, datya kana zvimwe zvidya zvemugungwa. Kunze kwematiles akagochwa, madhiri anogona kuodha mamwe madhishi akadai semiriwo yakakangwa, huku cartilage … Mutengo unodhura, wakakodzera vadzidzi, vashandi vehofisi vanoda kunwa.
Bac Hai tile-roasting yakafanana nezvitoro zvakawanda zvakakurumbira zvebarbecue, neVietnamese-style yemigwagwa. Yakapamhama uye ine airy nzvimbo.
7. Ms. Khanh’s barbecue shop
Kero: 252/47 Cao Thang, Ward 3, Dunhu 10, Ho Chi Minh Guta
Reference mutengo: 100,000VND – 200,000VND
Iresitorendi inonaka yekugocha muDistrict 10, yakachipa uye inotengeka, masitaera emumugwagwa haukanganwe zita reMs. Khanh’s barbecue. Kunyangwe chitoro chake chiri chidiki, ndiro dzakagochwa dzinofarirwa zvikuru ne “vamwari”. Vadzidzi, vadzidzi kana zvikwata zvekunwa vanoda iyi grill.
Mufananidzo: Idya Sap Saigon
Zvitsva zvinongedzo, zvinonaka zvakarungwa nyama ndiro, zvinonaka uye zvakasiyana. Menyu yakakangwa inosanganisira nyama yenguruve, nyama yemombe uye zvakasiyana-siyana zvegungwa zvakadai se shrimp, squid, octopus, oyster … Mushure mekugadzirwa kwakaoma, chikafu chakakangwa chinoputirwa pamoto wemarasha, zvinenge zvinonaka. Nekudaro, diki diki poindi ndeyekuti resitorendi haina chiutsi exhaust system, saka kana iwe uchiidya, zviri nyore kunhuwa.
8. Bake Nha.1
Kero: 158 Thanh Thai, Ward 12, Ruwa 10, Ho Chi Minh Guta
Reference mutengo: 150,000VND – 200,000VND
Kana iwe uchida kunakidzwa neVietnamese-style yakagochwa buffet, haugone kufuratira Grilled No.1, ine mukurumbira kwazvo barbecue resitorendi muRuwa 10. Kushandisa iyo buffet modhi, iyo resitorendi ine akawanda madhishi e barbecue.
No.1 Grilled Menu ine madhishi anodarika zana kubva kunguruve, nyama yemombe, huku, uye zvakasiyana siyana zvegungwa zvinyoro. Kunyanya, nyama yemombe pano ine madhishi anopfuura makumi matatu akakanyiwa nemasosi akasiyana. Inogona kutaurwa seyakaputirwa nenyama yemombe ine muto wemhiripiri nhema, nyama yemombe ine spicy muto, etc. Kana yakagochwa pachitofu chemarasha, inopa kunhuhwirira kwakanaka uye kana ichidyiwa nemiriwo, yakakura kwazvo.
Mukati memaawa akakwirira, zvokudya zvinononoka kusvika uye zvinowanzozara. Iwe unofanirwa kubhuka tafura pachine nguva kuti usazomirira kwenguva refu. Chitoro zvakare hachina exhaust system, saka zviri nyore kunhuwa hutsi.
9. Restorendi 399 Cu Bin
Kero: 399 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, Dunhu 10, Ho Chi Minh Guta
Reference mutengo: 100,000VND – 150,000VND
Kutevera iyo barbecue resitorendi muDunhu 10 mune yeVietnamese nzira yemugwagwa, iwe unofanirwa kubva wayeuka Cu Bin. Inowanikwa pa399 Nguyen Tri Phuong, Cu Bin inzvimbo yekudya yakachipa barbecue muDunhu gumi yevazhinji vechidiki nevanwi.
Barbecue menyu muCu Bin ine ndiro dzakawanda dzinosanganisira nyama nehove dzegungwa. Vashanyi pano vanopa rumbidzo yakanyanya yezvikafu zvegungwa zvakagochwa, zviri zvese zvemhando uye zvinonaka uye zvakachipa. Ne 150,000VND chete, unogona kudya uye kunwa wakasununguka uye kunakidzwa neakagochwa squid, hove rolls, octopus. Naizvozvo, vanonwa havagone kufuratira iyi kero huru yekudyira!
10. Yakagochwa Sau Ndove
Kero: 490/3 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, Dunhu 10, Ho Chi Minh Guta
Kuvhara runyorwa rwemaresitorendi ebarbecue anonaka muDunhu 10 ane zita rekuti Grill Sau Dung, inojairwa barbecue resitorendi yevanhu vazhinji vanogara pano. Kunyangwe iri nzira yekudyira yebarbecue, hapana kudiwa kwematafura emapuranga nezvigaro, hapana chikonzero chenzvimbo ine marambi anopenya, vashanyi vanouya kuno kuzodya vachiri kugara uye vakabatikana mazuva ese.
Iresitorendi ine nzvimbo yakapamhama uye ine mhepo yemugwagwa. Menyu ine ndiro dzakawanda dzenyama kubva kune nyama yenguruve, nyama yemombe, huku, nondo, porcupine … dzakarungwa zvakanyanyisa, zvakapfuma, kune kuravira kwevanhu veSaigon. Kubva pa55,000VND chete – 200,000VND, unogona kunakidzwa ne “dumbu rakazara” barbecue nevaunoshanda navo uye shamwari. Mushure mekudya chikafu chakagochwa, unogona kuraira poto inopisa paresitorendi kuti uderedze kubhowekana.
Heano gumi kero District 10 barbecue shop iyo Digiticket inoda kusuma kuvaverengi. Ndinovimba, kuburikidza neongororo iyi, iwe uchave nesarudzo dzinonakidza dzemapati ebarbecue ari kuuya neshamwari. Usakanganwa kutarisa zvimwe zvinonaka Saigon sidewalk grill kubva kuDigiticket ndapota. Ndinovimba une inoshamisa culinary chiitiko!
Dzimwe nzvimbo dzinonaka dzekudya dzinokurudzirwa neDigiticket kune vhiki ine vanhu vakawanda:
READ [REVIEW] Nước hoa Victoria’s Secret Bombshell | Excitinghochiminhcity
← Cách làm món sườn cốt lết rim mật ong cực tốn cơm | Excitinghochiminhcity
Top 10 shop đặt hoa tươi online đẹp uy tín ở TPHCM【2021】 | Excitinghochiminhcity →